मूर्ख दिवसः ती आठ खबर जसलाई मानिसहरुले ठट्टा सम्झिए
द नेपालटप | प्रकाशित: २०७५-१२-१९ गते
हिजो (सोमबार) अप्रिल फूल डे अर्थात् मूर्ख दिवस मनाइयो । धेरैजसो मिडियाले यस्ता खबर प्रकाशित गर्छन् जसलाई निकै सनसनीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ तर वास्तवमा ती झुटा हुन्छन् । नेपालमा पनि मूर्ख दिवसको अवसर पारेर मूलधारकै मिडियाले आफ्नो फेसबुक पेजमा फुटबल स्टार लियोनेल मेस्सी नेपाल आउन लागेको समाचार पोष्ट गरेको थियो ।
यस्तै, अर्को एक मिडियाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प नेपाल आउँदै भनेर अर्को काल्पनिक समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यो ट्रेन्ड नेपालमा मात्रै नभई विश्वभरी नै व्याप्त छ । तर मूर्ख दिवसमा अपनाइने यो ट्रेन्डले वास्तविक समाचार पनि झुटा हुन् कि भन्ने भान पैदा गरेको छ ।
आजकाल वास्तविक र झुटो खबरलाई छुट्याउनै मुश्किल हुन्छ । तर आज हामी तपाईंलाई यस्तै अचम्मका खबर बारे जानकारी दिँदै छौं जुन वास्तवमा नै वास्तविक थिए ।
१) अर्बपती उद्योगपति एलन मस्कले एउटा –याप गीत रिलिज गरेका छन् । स्पेस एक्स र इलेक्ट्रिक कार टेस्लाजस्ता ब्रान्डका मालिकले ‘आरआईपी हराम्बी’ बोलको गीत गाए । हराम्बी अमेरिकाको सिसिनाटी चिडियाघरको एउटा गोरिल्ला थियो जसलाई सन् २०१६ मा गोली हानिएको थियो ।
२) युक्रेनमा भएको पहिलो राष्ट्रपति चुनावमा एक्जिट पोलका अनुसार एक हास्यकलाकारले सबैभन्दा धेरै भोट पाएका छन् । एक्जिट पोलका अनुसार वोलोडिमिर जेलेन्स्कीले ३० प्रतिशत भोट पाए पनि राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेन्कीले १७ प्रतिशत भोट पाएका छन् ।
३) यति तपाईं इलेक्ट्रोनिक संगीत सुन्नुहुन्छ भने तपाईंलाई लामखुट्टेले नटोक्न सक्छन् । विशेषगरी यदि तपाईं अमेरिकी गायक स्क्रिलेक्सका गीत सुन्नुहुन्छ भने यस्तो सम्भव छ । एक नयाँ अध्ययन अनुसार ध्वनीले थुप्रै जनावरको प्रजनन, जनसंख्या नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका निभाउने गर्दछ ।
४) नाइजेरियाका कृषिमन्त्री अदु ओगबेहले दाबी गरे, ‘नाइजेरियाका मानिसहरु आफ्नो मोबाइल प्रयोग गरेर ब्रिटिश एयरवेजमार्फत लण्डनबाट पिज्जा मगाइरहेका छन् ।’ उनले एक –यालीमा नाइजेरियाका मानिसहरु विदेशी आयातमा अत्यधिक निर्भर हुँदै गरेको बताए ।
५) फिश स्लाइम अर्थात्, माछाको छालाले एउटा नयाँ एन्टिबायोटिक बनाउन सकिन्छ । दक्षिणी क्यालिफोर्नियाबाट माछाका १७ प्रजाति पाइएको छ । ओरेगन युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यी माछाका माथिल्लो छालाले नयाँ एन्टिबायोटिक बनाउन सकिन्छ ।
६) टोकियोको एक होटलमा तीन किलोग्राम तौल भएको बर्गर पस्किइयो । यो बर्गर १५ सेमी। लामो, २५ सेमी। चौडा छ । द ग्रान्ड हायात, टोक्योले आफ्नो खानाको मेन्यूमा ‘गोल्डेन जाइन्ट’ बर्गरलाई सम्मिलित गरेको छ । यसको मूल्य एक लाख येन ९जापान मुद्रा० लगभग एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
७) –यापर स्नूपडगले एउटा नाइटक्लबमा पैसाले भरिएको ब्याग छोडेका थिए । उक्त ब्यागमा चार लाख पाउन्ड ९पाँच करोड रुपैयाँ० नगद थियो । यो क्लबमा मालिक जर्ज स्लोअनले सन् २०१४ मा अमेरिकी –यापरले इंगल्याण्डको एक्सेटर शहरको भ्रमण गरेका थिए ।
८) अमेरिकी सेनाले समुन्द्रमा दुश्मनको गतिविधीमाथि निगरानी गर्नका लागि समुन्द्री जीवलाई भर्ती गरिरहेका छन् ।
पाइपबाट यसरी खस्यो ३१ लाख लिटर डिजेल
चार वर्षपछि यस्ती देखिन्छिन् बजरंगी भाइजानकी मुन्नी
जनकपुरमा बेवारिसे अवस्थामा पुरुषको शव फेला
फिल्मकर्मीले साथ दिएनन् : शिल्पा पोखरेल
पूर्वराजाको सम्पत्ति : यती एयरको हालीमुहाली
कांग्रेसमा कोइराला परिवारको सक्रियता
'सरकार माथिबाटै फर्कियाे, हामी जमिनको हाल बुझ्दैछौं'
प्रेमिकाको आमासँग शारीरिक सम्बन्ध राखेपछी …
यौन सम्बन्धपछि युवतीहरुमा देखिन्छ यस्ता ९ परिवर्तन
यौन इच्छा बढाउन के के खाने ?
यी ४ राशी भएका पुरुषहरुले गर्छन श्रीमतीलाई अत्यन्तै माया, कतै तपाइको राशी त परेन !
कति कमाउदा कति कर तिर्नुपर्छ ? यस्तो छ सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ आयकर दर
आज खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने, कुन राशिलाई राम्रो र के गर्नु हुँदैन् ?
सिद्धबाबा सडकखण्डमा पहिरो, पहिरोसँगै बगेका मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
कुलेखानीको ड्याम खोल्ने तयारी, चार जिल्ला बासीलाई सतर्क रहन आग्रह
सावधान ! फेसएप प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
काठमाडौं : बुढ्यौलीमा तपाई कस्तो देखिनु हुनेछ भन्ने तस्बिर देखाउने ‘फेस एप’ को बारे अहिले सामाजिक..
‘फेसएप’ प्रयोग गर्नेको डेटा असुरक्षित, प्रयोग नगर्न विशेषज्ञहरुको चेतावनी
काठमाडौं : बुढेसकालमा तपाइ कस्तो देखिनुहुन्छ भन्ने फेस एप’ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । बुढ्यौल..
बुधबारदेखि महँगिदै इन्टरनेट, कति रकम थपिन्छ ?
काठमाडौं : बुधबारदेखि इन्टरनेट महँगिने भएको छ। इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क(टीएनसी) लाग्ने..
इन्स्टाग्रामबाटै लाखौं डलर कमाउँछन् सेलेब्रेटी, सबैभन्दा बढी कमाउँने को ?
काठमाडाैं : सामाजिक सञ्जालको प्रयोग फोटो पोस्ट गर्न तथा खबर आदारप्रदानको लागि सबैले गर्दै आएका छन्। तर यीनै समाजिक..
फेसबुकलाई ५ अर्ब डलर जरिवाना
वासिङटन : प्रयोगकर्ताका तथ्यांकको गोपनीयता कायम राख्न नसकेको मुद्दामा फेसबुकलाई ५ अर्ब अमेरिकी डलर (साढे ५ खर्..
ट्वीटरमा नयाँ नियम, नयाँ नीति विरुद्धमा हुने पोष्टहरुमाथि प्रतिबन्ध
माइक्रोब्लगिङ साइट ट्वीटरले नियम लागू गरेको छ । आफ्नो प्लाटफर्ममा घृणाजन्य सामग्रीहरुमा कमी ल्याउन तथा अमानवीय भ..
हाम्राे टिम (कक्षभित्र)
धीरज कुमार : समाचार सम्पादक
रजित टको (भिडियो/फोटो)
अतुल कर्ण (भिडियो एडिटिङ)
हाम्राे टिम (कक्षबाहिर)
नरेश सर्राफ (वीरगन्ज)
सुभाष कर्ण (जनकपुर)
तेज बोहरा (कैलाली)
ध्रुवसागर शर्मा (म्याग्दी)
सजिता केसी (जापान)
बलराम मैनाली (यूके)
सुनील ढुंगाना (पाेर्चुगल)
इर्साद अन्सारी (कतार)
सन्दीप कार्की (दक्षिण काेरिया )
Copyright © 2019 Thenepaltop.com | All Rights Reserved.